The Voice Of Somaliland: Bogsanmaayo Jeero
Gabaygan magaciisa waxa la yidhaa Bogsanmaayo Jeero.Waxanu soo baxay Bishan Oktoobar 15-dii, 2006. Cidda hadlaysa aniga ma aha ee waa Somaliland oo ubadkeedii, wadaadkeedii, waranlaheegii, cirrolaheegii, caruurteedii, Siyaasigeedii, aqoonyahankeegii, ardaydeedii, xukuumadeeddii oo ta meesha salaaduba ka xidhmi laadahay ah ee shakaladu ka dacsayaan, taayiraduna ka banjarsanyihiin, ee bitroolku ka habayo, ee injiinku ka haskadaynayo, ee woxoo dhan marka la isku wada daro ee la isku wada duuduubo ugu darani waa dawladda. Aan garina gali, garina ka bixin. Wadana galin, wadana ka bixin. Ee ardufan. ee al malaaska ah.Ee indhaha, dhagaha iyo qalbigaba ka dem ah ee intii wax malaysay, ama wax maqlaysay ama wax arkaysay ama wax dareemasayna la colka ah een wax loo sheegona aan qaadan waxna handisi karin. Tamar darro iyo diciifnimo awgeed waa ta maanta kuwii mooryaanta shalay Xamar ka ahaa ay noo bootaynayaan.
Waxa kaloo jiraa Wadaado kitaabkoodii u uray oo kitaabka lagu akhristo Somaliland u haysta mid macmal ah oo ay Somaliland samaysatay. Kitaabka Xamar, Balcad, Jowhar, Kismaayo, Baldweyn, Baardheere iyo Guri Ceel iyo meelo kaloo badanna u haysta inuu yahay kitaabkii Saxaabigii waynaa Allah ha ka raali ahaadee Cusmaan Bin Cafaan, isku gayntiisa amray waqtigii u ahaa Amiral mu'miiniin ee lagu xuso Musxaf Ashariif "bi-khadi rasmi cuthmaaniyi' uu isku soo uruurshay inuu yahay.
Waa nimanka caqligoodu siiyay kuwii dabargoyntooda u dalacay ee weliba kusii dalacay inay maanta u rixiyaan oo ay daba dhaqaaqan. Neefka xoolaha ah yaaba ilaa caws yar ama woxogaa buushi ah ama biyo walax guunteed ku jira ilaa la hor qaado aan yeelin inuu ciduun iska daba galo. Waaba qof dhan oo Bin Aadmi ah, oo Eebbe maskax iyo garasho qoto dheer ku manaystay. Xataa waxa ka soo dhago weyn inay dadkooda iyo dalkoodaba dhabarka u jeediyaan kana dhex toosaan iyagoo u adeegayaa cadow oo miyaydaan arag kuwa Allow dumi ku soo qora mareegaha? Xataa reer "Buglaan" way ka xishoodeen inay eraygaa adeegsadaan. Sow ma aragtaan halkay kala taaganyihiin iyo intay isku jiraan cadaawadda qalbigooda xanxantaynaysa?
Maxay wargeyska u gubeen bay idinla tahay? Waa wargeyska kaliya ee wargeysyada Somaliland ka soo baxa wadaada Somalia (Gunti-Buurta-Maxaakiimta), lafaguray ee si geesinimo iyo wadaninimoba ku dheehantahay uga hadla wixii kolba jira ee markaa taagan.
S: Maxaa hadda u geeyay ee ay ku qoonsadeen?
J: Wadaada Somalia inay boqolaal dhalin yaro ah oo reer Somaliland ah lagu soo tababaryo Muqdisho [ iyo meelo kale oo dahsoon] ayuu qoray wargeysku. Waana run oo way jirtaa arrintaasi. Waxana caddaynayaa qaraarka ka soo baxay golaha isbahasysiga gaashaan buurta ku qadhaabata Kitaabka Allah, ee hadba magac la soo baxa sidii oo ay ku filnaan wayday: Amanaa billaahi wa rasuuluh wa naxnu mu'minuun.
Waxana lagu talo jiraa si tartiibtartiib ah oo aan la dareemin loo soo galiyo gudaha Somaliland. Inta hawlahaasi dhinac u dhacyaan afhayeenka maxaakiimtu waa "Sheikh" Shariif e u yidhaa: "Somaliland waa walaalahayo dhib lama rabno. Balse inaan cadowga meel uga soo wada jeedsano ayaan rabnaa".Hoostana arrimhii qalqaalada iyo ka dhex tooska laga ababulo.Sidii Kismaayo iyo baldweynba ka dhacday.Haddaan edab loo yeelin inta goori goor tahay, way ka dhex toosanyaan. Waa hubaal midhkaasi. Rumayso ama ha rumaysan. Dadkaygu dhoohanaa ma dhagweynbaa. Oo jeeroo dhegta dhiiga loo daro miyaanay wax garan. Siday yihiin? Anigu kolay nimaan ahay kuwan ciilkooga inaan u dhinto ma laga yaaba? Bal dad kii shalay dabar goyntooda iyo dun go'da ku taamayay ayay weli daba socdaan oo ay walaalan nahayda meelahaa ka leeyihiin. Oo shalay markuu ku tumayay ee u ku rukaasayay ee xataa markuu kaa daalay caddaankii Koonfur Afrika kuu soo kiraystay miyaanu ahayn, kan aad leedihiin walaalaalnu nahay? Muxuu se isagu u garan waayay inaad walaalo tihiin? Walaatinimadu ma xagiinnu bay ka soctaa?
Kuweena innagu dhex jiraa kun jeerbay ka khatarsanyihiin Cabdillaahi Yuusuf iyo baasaanboydiisa cagaagan ee aradan ee gaajaysan. Kuweeno waa niman nastay oo cayilay oo tunka dibida yeeshay oo meel ay musaaracada ku taba bartaan raadinaya. Magaalo wal oo Somaliand ka mid ahna way joogaan. Waa ubadkeenii, waa inamadeenii, balse waa la innoogga hor maray, intaynu qaad ruugaynay!!! Maskaxdaa inta laga maydhay wixii horee ku jiree, laga shubay ee laga dhaqdhaqay ayaa dib loogu qabtay suxuun cajaa'ib ah oo aydaan malaysan karin. Sidaa waxa samayn jiray KGB-dii Ruushka waqtigii dagaalka qaboobi jiray.Arrintani waa dhab, balse dadkeenu indhahay ka laliyaan sidii waxaan jirin ama ay riyo tahay oo ay iska dhammaan doonto !!!. Hadda bal eega waxay soo wadaan haddaan dadweynuhu ka hor tagin.
Markaa Somaliland oo cabashadeedii, cataabkeedii, cabaadkeedii, calooyowkeedii, ciflaynteedii, cabudhkeedii, cifcifteedii iyo qaar kaloo badan aan khad, warqad iyo waqti loo wada helaynin waa kuwane, akhris wacan. Balse dhuuxis iyo dhadhansasho fiiro badani ku la dhantahay, kuna dheehantahay ayaa la idiinka fadhiyaa.
Bal Riyaaliyo buguxiiso ha iiba danbeeyaane
Col baadiyasanbaan arkoo haatan soo baraarugay e
Bal xaggee bay jireen goortii la is gale la isku baalbaalay
Ee bilaawaha iyo magligiyo baaruudda la isku ayshaaday
Barbaartii waa kuwaa bahdilee gubay wargeyskiiye
Bansiiniyo waxay la roorayaan bowsi meel madhane
Bararaftii Turkiyo la dhugay been ku sheekh laha e
Bin Bililiqiyo Indha Cadday Bilaal Bin Ribaax uba maleeyeene!!!
Bin Mooryaan iyo waxay magansadeen Beer-laxawsyada e
Waa kuwii Birjeex iyo labaxay Boqonna goystiiye
Waa kuwii Boqolsoon iyo haligay culimo baaxuure
Baaraxbaabay u wada baxeen ubaaxii laandkiiye
Baaqyay iiga soo direen balad idaylkiiye
Bigil baa loo afuufiyo bararaf shaydaane
Banaadir iyo waxay eegayaan Balcaddii hore e
Bartay joogaan uma muuqatiyo nabad bisaylkeede
Ma waxyaa ka soo burqaday baladka maansheeya!
Bal maxay ka sii eegayaan bixiso waa yaabe?
Bogsanmaayo intay iga mid yihiin kuwaas leh beerka xuushada e
Bogsanmaayo intay daba baqoolayaan kii haraatiyay e
Bogsanmaayo intay arrin nin kale daba bagaafaane
Afartaa baddo guuxday iyo badayskii qodhac dheer dhe!
Afar kalena waa bugaanbugiyo bigilo aan baano
Afar kalena waa biriijka maansadoon soo balaysimaye
Bogsanmaayo intay biyo nin kale shushubi dhacarsanaayaane
Bogsanmaayo intay buul nin kale u rixinayaane
Bogsanmaayo intay guurti biiqday soo hataatuqine
Bogsanmaayo jeeroo buugiyo la saxo musuq ragaadkiise
Bogsanmaayo jeeroo balwad iyo la naco qaadkan lagu waashay
Bogsanmaayo jeero bawaar iyo la naco dhuuni raacyada e
Bogsanmaayo jeeroo laga haamo kuwan bowdka iibsadaye
Bogsanmaayo jeeroo la saro arrimihii baydhsanaan jiraye
Bogsanmaayo intay baloodh iyo aqaar maanka ku hayaane
Bogsanmaayo intay laba boglaynayaan kuwii la soo xulaye
Bogsanmaayo intuu Jawaan bahday meeday leeyahaye
Bogsanmaayo intay bayt nin kale hoos hadhsanayaane
Bogsanmaayo is qabsiyo jeero la naco biidhi qaataha e
Bogsanmaayo intay baylahi muuqatee laga aguugaayo
Bogsanmaayo intay baaba'sanyihiin kuwii guusha noo sidaye
Afar kalena waa beertoo ii baxdiyo barwaaqo hadalkay dhe
Bogsanmaayo intay balan iyo wacadkaba sii gambiyayaane
Bogsanmaayo intay badhifuraayaan distoorkii jiilanaan jiraye
Bogsanmaayo intay borobagaandaha nin kale hoos dhuganayaane
Bogsanmaayo jeeroo idaacadiyo la helo baafiyoo kale e
Bogsanmaayo jeeroo bugaanbugtiyo le helo laliye baaxuure
Bogsanmaayo jeeroo madihii la sugo halkuu beri ahaan jiraye
Bogsanmaayo jeeroo Buglaan marin la qaadsiiyo
Bogsanmaayo jeeroo badhkayga maqan soo dhacsado maanta
Bogsanmaayo jeeroo Bilan soo dhacshoon muujo tamartayda
Bogsanmaayo jeeroo Bu'aysane ka dhigo marin xadhaadhoobay
Bogsanmaayo dalkay giddi dhammaan anoon baalka waada saartin
Bogsanmaayo jeeroo bari iyo galbeed meersho madahayga
Bogsanmaayo jeeroo bad iyo barriba haykalku islaaxo
Bogsanmaayo jeeroo nacabku ka jabo liilka bawdada e
Bogsanmaayo jeeroon gar eexo iyo gardarro beerka kala gooyo
Bogsanmaayo jeeroon dulmane xaqiis bixiyo oo samuhu daahiro e
Bogsanmaayo intaan beertaan tabacaday cidi ku taamayso
Bogsanmaayo jeeroon buraashadda u biyaystoo meel aan garanaayo
Afartaa baddo guuxday iyo Banfas geddiisii dhe!
Afar kalena waa beertoo ii baxdiyo barwaaqo hadalkaye
Maqalloocshiyo bahdaa fariin baacsaniyo taar u dirayaaye
Waa bishaaro dabayluhu wadaan iyo saxal baxeeniiye
Baladkii Hargeysiyo hadduu ka bilig yidhi waqal diraac hooray
Ooy barad iyo hilaac waa lama huraane dagalka baabiinin
Asuu maansheeyay beelihii Maroodi jeex baaraxa u yiilay
Budulkiyo boodhkiyo intii shuxlee biqil ragaadsiiyay
Iyo intii bahal halaq jibaaxduu burxaan bixine
Waa barkhad Alloo bakteeriyay idinka dilaysaaye
Markuu baraf dhalaalana waa biyo durduuriyo nimco siyaada ahe
Ba'nay inaad tidhaahdaan idinkuma banaanayne
Waa la idin bilkeedinaayee khayr basiid dhaha e
Bisinkuna waa tawasulka Eebbee yay bishimihiin daynin
Mohamoud H Nugidoon
Posted by Ahmed Quick Ahmed Quick at Thursday, October 19, 2006